မဝင်းမော်ဦးကို ပြေႛခဵီလာခဲ့တဲ့ ဆရာဝနိံြစ်ဦး — မြန်မာဌာန
မဝင်းမော်ဦးကို ပြေႛခဵီလာခဲ့တဲ့ ဆရာဝနိံြစ်ဦး
လြန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ ိံြစ် ၁၉၈၈ ခိုံြစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံိံိုင်လိုႛ လမ်းမတေမြြာ ထြက်္ဘပီး ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပုကတဲ့ ရဟန်းရြင်လူ ကေဵာင်းသားူပည်သူတေကြို စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေႛမြာ ူမန်မာ့တပ်မတော်က သေနတ်နဲႛ အုကမ်းဖက် ပစ်ခတ် ္ဘဖိခြြင်းခဲ့ရာမြာ ရန်ကုန်္ဘမိြႛ မဟာဗ္ဌိံလြပန်းူခံအလြန် ဆူးလေဘုရားလမ်းနဲႛ ကုန်သည်လမ်းထောင့်မြာလည်း ကေဵာင်းသားူပည်သူတြေ အသက်ဆုံး သြေးေူမကဵ ခဲ့ရပၝတယ်။
ရြစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံတြင် ပၝဝင် ဆ္ဋိံူပသူမဵားကို ၁၉၈၈ ခိုံြစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေႛက စစ်တပ်မြ အုကမ်းဖက် ပစ်ခတ်္ဘဖိခြြဲစဉ် သေနတ်ဒဏ်ရာမဵား ရရြိထားသော ၈ တန်းကေဵာင်းသူလေး မဝင်းမော်ဦးကို ဆေးတက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားိံြစ်ဦးက သယ်ဆောင်လာသော မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: Internet)
အဲဒီလို ကဵဆုံးတဲ့အထဲမြာ ကမ္တာတဝြမ်း သိသြားတဲ့ ကေဵာင်းသူတဦးကတော့ မဝင်းမော်ဦး ူဖစ်ပၝတယ်။ သြေးသံအလိမ်းလိမ်းနဲႛ မဝင်းမော်ဦးရဲႛ ခ္ဌိံာကိုယ်ကို ဆရာဝနိံြစ်ဦး ပြေႛခဵီလာတဲ့ဓာတ်ပုံဟာ ဒီနေႛထိ ကမ္တာအိံြံႛ ပဵံႛိံြံႛန္ဘေပီး အဲဒီဓာတ်ပုံဟာ ူမန်မာ့တပ်မတော်ရဲႛ အုကမ်းဖက်မကြို သက်သေထူနေတဲ့ ူပယုဂ်တခု ူဖစ်နေပၝတယ်။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံထဲက မဝင်းမော်ဦးကို အမဵားစု သိသြားုကပေမယ့် သူႛခ္ဌိံာကို သယ်လာတဲ့ ဆရာဝနိံြစ်ဦးကို သိတဲ့သူ အတော် နည်းပၝးနေပၝတယ်။
အဲဒီ ဆရာဝနိံြစ်ဦးအေုကာင်း ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသူတဦး ူဖစ်တဲ့ မကလဵာရဲႛ ေူပာူပခဵက်ကို စုစည်း္ဘပီး RFA အဖြဲႛသား ကိုနေရိန်ကေဵာ်က တင်ူပထားပၝတယ်။
Please see this web-site;
so sad about this news and at the same time thank you very much RFA for this news. i can't imagine how cruel this junta r
Even though their body are expired , their name are immortal. I slute them.
တကယ္စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပါပဲ... တကယ္ကို လူမသိပဲေပးဆပ္ခဲ့ရတာ... ဒီဆရာ၀န္ ၂ ဦးကို အေလးျပဳလိုက္ပါတယ္
don't forgert what happened
21 years is look like today.I see this picture and my tear become drop again.I am waiting militray last life...
No one know that howmany people died in 88.you can say that it was once uponatime,but we never foget it..stupid military killed our students..
I think the one is notadoctor but HTOO EIN THIN . Ma I right ? Pls Could someone who knows that pic confirm about it ?